ဖုန်းက သုံးတတ်ရင် သုံးတတ်သလို အကျိုးရှိတယ် လို့ ပြောတဲ့ အဆိုတော် မိုးထက် – DigitalTimes
ဂီတလောကထဲကို ၂၀၁၀ခုနှစ်က ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ပရိတ်သတ် အခိုင်အမာ ကို ရရှိနေတဲ့ သူကတော့ တေးရေး၊ တေးဆို မိုးထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိုးထက်နဲ့ တွေ့ဆုံတုန်း သူရဲ့ဂီတ လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကိုပါ မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လတ်တလော မိုးထက်ရဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုလေးကို ပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သီချင်းတွေ ရေးပေးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့် အခွေကိုလည်း အားရင် အားသလို အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
Q. အခွေ စီစဉ်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါလား။
အားရတဲ့ အချိန်ကျရင် တစ်ခြား အလုပ်တွေကို ဘေးဖယ်ပြီးလုပ်တယ်။ လုပ်နေရင်းနဲ့ နည်းနည်းအားလျှော့ သွားရင် ရပ်လိုက်တယ်။ အတီးပိုင်းတွေတော့ပြီးသွားပြီ။ တချို့အပိုင်းတွေ နည်းနည်း စိတ်တိုင်းမကျသေးလို့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေလို့ နည်းနည်းကြာနေတာပါ။ ထွက်လာရင်တော့ အမိုက်စားဖြစ်မယ် လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။
Q. သီချင်း ဘယ်နှပုဒ်လောက်ပါမလဲ။ သီချင်းပုံစံတွေကရော လုပ်နေကျ အတိုင်းပဲလား။
၁၄ပုဒ်ရွေးထားပါတယ်။ ၁၄ပုဒ်အောက်တော့ လုံးဝ မလျှော့ဘူး။လုံးဝလည်း မတိုးဘူး။၁၄ပုဒ်အတိ ထည့်မှာပါ။ ကျွန်တော်သွားနေကျ ပုံစံတွေပါမယ်။ ဟိုးအရင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေတော့ လုံးဝ မသွားတော့ဘူး။မြန်မာအကြိုက် ပါမယ်။ မြန်မာအကြိုက်ကိုမှ ကျွန်တော်အကြိုက် အနောက်တိုင်းပုံစံနဲ ရောထားတာပါမယ်။ အသစ်အဆန်းတွေ လည်း ဖန်တီးနေတယ်။ အဲဒါတွေပါ ထပ်ပါမှာပါ။
Q. Featuring အနေနဲ့ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပါမလဲ။
၇ယောက်လောက်ပါမယ်။ အခုလောလောဆယ် လျာထားတဲ့သူတွေကတော့ မနီနီခင်ဇော်ပါမယ်။ X-BOX ၊ Little-Z၊ လင်ဇီမေ၊ ရဲရင့်အောင်နဲ့ရွှေထူး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပါမယ်။ တစ်ခြားသူတွေလည်း ပါဖို့ရှိပါတယ်။ အနီးကပ်မှပဲ အတည်ပြုဖြစ်မှာပါ။
Q. တေးရေးတွေကရော ဘယ်သူတွေပါမလဲ။
ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း သေချာရေးတာပါ။ Featuring ထဲမှာ Melody ဆိုတဲ့သူတွေက သူတို့ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ ရှိပါတယ်။
Q. Title ရောရွေးပြီးပြီလား။
အကြမ်းပေးထားတာကတော့ စာမျက်နှာများ လို့ ပေးထားပါတယ်။ လူတိုင်းက ကိုယ်ဘဝကိုယ် စာအုပ်တစ်အုပ်လို သဘောထားပြီး ရေးနေကြတယ်။ သူများဖတ်ဖို့ ရေးပေးနေသလိုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေက မကောင်းဘူးဆိုရင် နောက်လုပ်မယ့် အရာတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါ။
Q. အခွေ ဘယ်တော့လောက် ထွက်ဖြစ်မလဲ။
Q. လတ်တလော ကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းBrand ကိုပြောပြပေးပါလား။
အခုတော့ iphone ကိုင်ထားပါတယ်။
Q. ဖုန်းကို ကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက် ဘာတွေသုံးဖြစ်လဲ။
ကျွန်တော် ဖုန်းသုံးဖြစ်တာနည်းတယ်။ သုံးရင်လည်း Facebook သုံးဖြစ်တယ်။ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ အင်တာနက်မှာ ရှာတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေ Down ဖြစ်တယ်။
Q. ဖုန်းထဲမှာ သုံးဖြစ်တဲ့app တွေကရော။
မြူးဇစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်။ ကျန်တောတော့ သိပ်မရှိဘူး။ လိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေတော့ ထည့်ဖြစ်တယ်။
Q. ဖုန်းကလူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိ အသုံးဝင်လဲ။
ဖုန်းကြောင့် အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ အချိန်အများကြီး မပေးရပဲ ဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာတွေရှိတယ်။ တချို့ကိုယ်သိချင်တာတွေကို ဖုန်းနဲ့ရှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆို ပြည်ပက ဂီတတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သိရတာလည်း ဖုန်းကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ သိအောင် ဖုန်းကတစ်ဆင့် အင်တာနက်ကနေပဲ ဆက်သွယ်ရတာလေ။ ဖုန်းကသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလို အကျိုးရှိပါတယ်။
Ransomware ဖန်တီးလို့ ထောင်ကျတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်သား ဟက်ကာ